မှားချက်ရယ် တစ်ချက်ကြောင့်၊ စေတနာတခုမှ ဝေဒနာများစွာသို့..
စေတနာအစစ်အမှန်ရှိပါသော်လည်း မသိလို့ ဖြစ်သွားရတဲ့ အမှားမျိုးကို တချို့ကိစ္စရပ်တွေမှာ ခွင့်လွှတ်လို့ရကောင်းပါရဲ့။ ။ကာယကံရှင်မှ စေတနာ နဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ လုပ်ရပ် တခုမှာ ပေါ့ဆမှုကြောင့် မမှားသင့်ပဲ မှားမိသွားတဲ့အခါမျိုးကျတော့ ဘယ်လိုမှ ခွင့်လွှတ်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး ဆိုတာ သိစေချင်လို့ ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုရေးလိုက်ပါတယ်။
ခေတ်မှီတိုးတက်နေပါတယ် လို့ ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာတောင် ခုလိုအမှားမျိုးပြုမိတဲ့ အဖြစ်တခု ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမ ဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ မမှားသင့်တဲ့ အမှားတခု၊ မကြာခင်ရက် အနည်းငယ်က ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဆေးပညာလောကမှာ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် ။ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းချုပ်က ဒီလိုပါ ။
၂၀၁၁၊သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ က ထိုင်ဝမ် နိုင်ငံ ရှင်းကျု 新竹 မြို့ နေ 邱 မျိုးရိုးအမည်၊ အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတယောက် တိုက်ပေါ်မှ ခုန်ချ သေကြောင်းကြံခဲ့ရာမှာ ဦးနှောက်သေဆုံးခြင်း ( Coma ) လို့အတည်ပြုပြီးတဲ့နောက် ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှ သူ့ ရဲ့ ကောင်းမွန်နေသေးတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ မှ အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း တို့အား လိုအပ်သလို အသုံးပြု နိုင်ဖို့လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ဆေးရုံကြီး National Taiwan University Hospital (台大醫院) ရဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အစားထိုး ခွဲစိတ်ကုသရေးအဖွဲ့ သို့အမြန်ဆုံး အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ် ၊ ထို အဖွဲ့ မှ လှူဒါန်းသူ( Donar) နဲ့ လက်ခံသူ (Recipient) အံဝင်ဂွင်ကျ ရှိ မရှိ အတွက် လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးမှုများ ( သွေးအမျိုးအစား၊ ကူးစက်ရောဂါ ရှိမရှိ ၊ ဘီပိုး စီပိုး HIV အစရှိတဲ့ သွေးစစ်ခြင်း အပါအဝင် အသေးစိတ် စစ်ဆေး ခဲ့ပါတယ် ၊ ) ။ သွေးစစ်ဆေးရေး ဓါတ်ခွဲခန်းမှ HIV ပိုးရှိသည် (HIV Reactive) ဆိုတဲ့ အဖြေကို အစားထိုးခွဲစိတ်အဖွဲ့ သို့ဖုံးဖြင့် အကြောင်းကြားရာမှာ ၊ လက်ခံ နားထောင်သူမှ ပေါ့ဆစွာ ဖြင့် HIV ပိုးမရှိပါ ( HIV-Non Reactive) လို့ ရေးမှတ်လိုက်ပါတယ် ။
သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ မှာ - အဆိုပါ အကောင်းပကတိကျန်နေသေးတဲ့ အဆုပ်၊ ကျောက်ကပ်တစ်စုံ နှင့် အသည်း တို့ ကို ၊ NTUH မှ လူနာ ၄ ဦး ထံ သို့၎င်း၊ နှလုံးအား ချန်သဆေးရုံ(成大醫院) မှ လူနာတဦး သို့ ၎င်း အစားထိုး ခွဲစိတ် ကုသပေးလိုက်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ မှာ မှ အဆိုပါ လှူဒါန်းသူမှာ (HIV ပိုးရှိသည်) လို့ သိရပြီး နောက်တကြိမ် ပိုးထပ်စစ်ပါတယ်။ သေချာပါတယ် ။ ဒီလှူဒါန်းသူမှာ HIV ပိုးရှိနေခဲ့ပါပြီ ။ ဒါကြောင့် ချန်သ ဆေးရုံမှ နှလုံးအစားထိုးခွဲစိတ်အဖွဲ့ နဲ့ အစားထိုးခံရသူလူနာရှင် တို့ အား အကြောင်းကြား အသိပေးခဲ့ပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ - NTUH ဆေးရုံကြီးမှ တာဝန်ရှိသူများက ကူးစက်ရောဂါထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲရေးဌာန (CDC) ၊ အင်္ဂါအစားထိုးခြင်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်းဌာန နဲ့ အစားထိုးကုသခံ လူနာများရဲ့ မိသားစုများထံ အကြောင်းကြားပြီး ထို လူနာများအား HIV ရောဂါကာကွယ်ဆေးများ သုံးစွဲဖို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အဆိုပါ ခွဲစိတ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ ( ဆရာဝန် ၊သူနာပြု )အား ကာကွယ်ဆေးသုံးစွဲကုသရန် မပြောကြားခဲ့ပါ။( HIV ကာကွယ်ဆေး ဟာ ရောဂါမဖြစ်အောင် ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်မှု ထိရောက်မှုရှိတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို ယခုထက်တိုင် သေချာစွာ မသိကြသေးပါ )
ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ အခြေအနေကို ပြန်ပြီး စစ်ဆေးကြည့်တဲ့ အခါမှာ အဆိုပါ HIV ပိုးရှိသူလူနာထံမှ အင်္ဂါအစိတ် အပိုင်းများကို ဖြတ်တောက်ခွဲစိတ်ပေးတဲ့ အဖွဲ့မှာပါဝင်သူ အနည်းဆုံး ၆ ဦး၊ အသည်း၊ အဆုပ် နှင့် ကျောက်ကပ် တစ်လုံးစီအား အစားထိုးပေးတဲ့အဖွဲ့ မှာပါဝင်သူ ၄ဦးစီ ။ နှလုံး အစားထိုးအဖွဲ့မှာ ပါဝင်သူ ၃၁ ဦး ၊ စုစုပေါင်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ အနည်းဆုံး ၅၃ ဦး တို့မှာ HIV ရောဂါ ကူးစက်ခံရဖို့အလားအလာ တွေ ရှိနေပါတယ် ။ ဒီထက်ဆိုးတဲ့ အခြေအနေကတော့ အစားထိုးကုသမှု ခံလိုက်ရတဲ့ လူနာ ၅ ဦး တို့ပါပဲ ။ သူတို့ ဟာ ဒီရောဂါပိုးအများအပြား ပါရှိနေတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကိုရယူထားရတဲ့ အတွက် HIV ရောဂါ လက္ခဏာတွေကို မလွဲမသွေ အမြန်ဆုံး ကူးစက်ခံစားရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စမှာ တာဝန်ရှိတဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်း နဲ့ အစားထိုးခွဲစိတ်အဖွဲ့ တို့မှဝန်ထမ်းများအား ထိုက်သင့်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အခြေအတင် ဆွေးနွေးနေကြဆဲပါ ။
လက်ရှိ ဥပဒေ အရ ဆိုရင် အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများကို အစားမထိုးမှီ HIV ပိုး ရှိ ၊ မရှိ စစ်ဆေးရပါမယ် ။ ပိုးရှိ သူရဲ့ အင်္ဂါကို အစားထိုးကုသမှု မပေးရပါ ။ ထို အချက်ကို ဖေါက်ဖျက်ပါက တာဝန်ရှိသူအား ဒါဏ်ငွေ သုံးသောင်း မှ တစ်သိန်းခွဲ (ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာ ) ချမှတ်နိုင်တဲ့ အပြင် ထောင်ဒါဏ် ၃နှစ်မှ ၁၀ နှစ်ထိ ချမှတ်နိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ ခုလို ပေါ့ဆမှု အတွက် လူနာ သေဆုံးပါက ၊ အဆိုပါဆေးရုံအား ဒါဏ်ငွေ ငါးသောင်းမှ ငါးသိန်း ထိချမှတ်နိူင်ပြီး ဆေးရုံလုပ်ငန်းလိုင်စင် ပိတ်သိမ်းခြင်း တစ်လမှ တစ်နှစ်ထိ ချမှတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအဖြစ်ကို ပြန်လည် သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် - ဦးနှောက် သေဆုံးသူထံမှာ HIV ရောဂါပိုးရှိနေမှန်း အမှန်တကယ် မသိရှိခဲ့ပါ၍၊ အကောင်းအတိုင်းကျန်ရစ်နေတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို အလဟဿမဖြစ်စေပဲ အခြားသူတွေ အသက် ကယ်စေလိုသဖြင့် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ လူနာရှင် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတို့ရဲ့ စေတနာကောင်းဟာ ၊ ပေးအပ်ခံရသူလူနာများနဲ့ မိသားစုများကို ကနဦး အစမှာ အတိုင်းအဆမရှိ ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပေမဲ့၊ တစုံတယောက်ရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် သက်ဆိုင်တဲ့ လူပေါင်းများစွာအတွက် ဝေဒနာများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ် ။ဘယ်လို ဒါဏ်ငွေ ထောင်ဒါဏ်မျိုး ချမှတ်ပေမဲ့လည်း၊ ဒီ ရောဂါဆိုးကြီး ဘယ်အချိန်မှာ ပေါ်ပေါက် ခံစားရလာမလည်း ဆိုတဲ့ ကြောင့်ကျ စိုးရိမ်မှု ဝေဒနာ များကို ချေဖျက်လို့ ရနိုင်မယ် မဟုတ်ပါဘူး ။
စကားတခွန်းကို ( ရှိသည် / မရှိပါ ) သေချာ နားမထောင်ပဲ ပေါ့ပေါ့ဆဆပြုခဲ့သူ၊ တိုးတက်လှပါတယ် ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတောင်( သွေးအဖြေ မှတ်တမ်းကို အရေးကြီးလျှင်ကြီးသလို Fax ,e mail စသဖြင့် ပေးပို့နိုင်ပါလျှက်နဲ့၊ ယခုဆိုလျှင် electronic chart system များနဲ့ အလွယ်တကူ မှတ်တမ်းတင် ပြီး အဖြေလွှာ ရှာယူနေနိူင်ပါလျှက်နဲ့ )ဖုံးဆက်ပြီး ပေါ့ပေါ့ဆဆ ပြောဆိုသူ၊ မှတ်တမ်းတင်သူ၊ နှစ်ဦး နှစ်ဖက်မှ နှစ်ခါပြန်စစ်ဆေးခြင်း Double Check မလုပ်ပဲ ခွဲစိတ်မှုကို ပြုလုပ်သူ ၊ အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူများ ရဲ့ ပေါ့ဆပုံများကို သေချာစစ်ဆေး အရေးယူဖို့ လုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်ပေမဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါခံစားလာရမဲ့သူတွေ အတွက်တော့ လောလောဆယ်တော့ ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေးသောက်သုံးစေဖို့နဲ့ အချိန်မှန် သွေးစစ် ဆေး ပေးမှု အတွက် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးမှုမျိုး သာ ရှိနေပါသေးတယ် ။ပိုပြီးတိကျသက်ရောက်တဲ့ ဥပဒေ မျိုး ချမှတ်ပေးဖို့ လည်းတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ ခုလို အမှားတခုတွေ့ ရင် အမှန်ဖြစ်အောင်၊ နောက်ထပ် အလားတူ အမှားမျိုး မဖြစ်ရလေအောင် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမှုတွေ ရှိနေတာကတော့ သင့်တော် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ အဆိုးထဲက ရလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာကောင်းတခု လို့ ပဲ မှတ်ယူရမှာပါ ။
အဆိုပါဆေးရုံမှ တာဝန်ရှိသူများကလည်း သူတို့ရဲ့ မှားယွင်းပေါ့ဆမှုတွေကို ဝန်ခံ တောင်းပန် ခဲ့ ပြီး လိုအပ်တဲ့ ပေးဆပ်မှုများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ အကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ် ။ အမှားကို ဝန်ခံတာဝန်ယူတတ်တဲ့ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းမျိုး ရှိနေသေးတာကြောင့် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုလည်း ခုလို အခြေအနေမျိုးမှာ ရှိစေချင်လှပါတယ်။
ခုလို လူတဦးရဲ့ ပေါ့ဆမှု ကြောင့် အမှတ်တမဲ့ မှ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အခြေအနေတွေ ဖြစ်သွားခဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ရှိနေခဲ့ပါတယ် ။
ကားမောင်းသမားတဦး ပေါ့ဆမှုကြောင့် ခရီးသည် အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ ၊ လေယာဉ်ထိန်းသိမ်းမှူ အချက်ပြမှုပေါ့ဆလိုက်လို့ခရီးသည် အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ ။လမ်းတံတား အဆောက်အဦ အင်ဂျင်နီယာ၊ ကန်ထရိုက် တို့ရဲ့ ပေ့ါဆမှု မသမာမှုများကြောင့် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ ၊ အဖွဲ့အစည်းတခု တိုင်းပြည်တခုရဲ့ ဦးဆောင်သူ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် တာဝန်မဲ့မှုကြောင့် မသမာမှုများကြောင့် တိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့ ရဲ့ အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ်များ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ တွေဟာ ကြိုတင် ကာကွယ်မှု မပြုနိုင်တဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် ဆုံးရှုံးရတာတွေ လိုပဲ ရင်နာစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
အကယ်၍သာ လူတိုင်း လူတိုင်း အရာရာကို သတိလက်မလွတ် လုပ်ကိုင် နေထိုင် နိုင်ကြမယ် ဆိုရင် ၊ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်သိတဲ့ အသိတရားလေးရော၊ အမြဲမပြတ်ထားနေရမဲ့ သတိတရားများပါ ရှိနေနိုင်မယ် ဆိုရင်........
စေတနာအစစ်အမှန် ရှိပါသော်လည်း မသိလို့ ဖြစ်သွားရတဲ့ အမှားမျိုးကို တချို့ကိစ္စရပ်တွေမှာ ခွင့်လွှတ်လို့ရကောင်းပါရဲ့။ သို့ပါသော်လည်း စေတနာလည်းမပါ ၊ သိလျှက်နဲ့ တမင်မှားနေကြတဲ့ သူများရဲ့ အမှားတွေကိုတော့ ခွင့်မလွှတ်စေချင်ပါ ။
ဒီနေရာက နဂိုမူလသတင်း ကို မှီငြမ်းပါတယ်။
:kiki : at 8/29/2011 05:00:00 PM
ဂွတီး ဂွကျ ....
တရုပ်လူမျိုးတွေ အတော့်ကို ဂွတီးဂွကျ နိုင်လွန်းတယ်။ စကားပြောတာ၊စာရေးတာ၊တွေးခေါ်တာတွေမှာ သူများတွေနဲ့မတူ ပြောင်းတိပြောင်းပြန်တွေ ရှိလွန်းတယ်။ အထာ မပေါက် တဲ့သူတွေ အတွက် ရယ်ရမလို ငိုရမလို အဖြစ်မျိုးတွေ ကိုယ်တွေ့ ကြုံ ခဲ့ရတာ မို့ခုလိုပဲ ကောက်ချက်ချလိုက်မိပါတယ်။သူတို့တိုင်းပြည်နေ သူတို့ဆန်စား သူတို့ ရေသောက်ပြီး သူတို့ အကြောင်း မဟုတ်တရုတ် ပြောလိုက်တာ လို့ ယူဆနေသူများ ဒါလေးတွေ ဖတ်ကြည့်ကြပါအုံး။
ဦးစွာပထမ စာ အရေးအသားက အစ သူများနဲ့ မတူ ၊ ထော်လော်ကန့်လန့် ။ များသောအားဖြင့် ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြသော လူမျိုးများစွာ ဘာသာ များစွာတို့ ဟာ အက္ခရာ စာပေ တွေကို စာရွက်ပေါ်မှာ ရေးကြတဲ့ အခါ အပေါ်ဆုံးလိုင်း ၊ ဘယ်မှစပြီး ညာ သို့ အလျှားလိုက် ရေးလေ့ရေးထ ရှိကြပါတယ်။ သူများနဲ့ မတူ တရုပ်စာတွေကျတော့ ညာဘက် အပေါ် ဆုံးဒေါင့်မှ အပေါ်အောက် ဒေါင်လိုက် ရေးတာ ရှိသလို ၊ ညာဘက်မှ ဘယ်ဘက်သို့ အလျှားလိုက် ရေးချတာတွေလည်း ရှိပါရဲ့။
ဒါကြောင့် စာတကြောင်းကို ဘယ်ဘက်မှ စဖတ်ရမလား ၊ ညာ ဘက်က စဖတ်ရ မလား မသိလို့ နားလည်မှု လွဲ အထင်လွဲ ခံရတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါသေးရဲ့လေ။ မြန်မာစာပေမှာ ကတ္တား၊ ကံ ၊ ဝါစက၊ ကြိယာ တွေ ကို သဒ္ဒါနည်း နဲ့ အညီရေးရတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာမှာ လည်း Noun,Verb , Subject ,Object ဆို တာ တွေ နဲ့ အညီ စာတကြောင်း ဖွဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုပ်စာမှာ တော့ ဘာသဒ္ဒါ နည်းစနစ်မှ မလိုပါဘူး တဲ့။ ဂွကျပုံများ ... ဒါဆို ဘယ်စည်းကမ်းတွေ နဲ့ စာ ရေးကြသလည်း လို့ဆိုတော့ ဒီလိုပဲ အဆင်ပြေသလို ရေးကြတာပဲ တဲ့လေ ။
ကဲ ဥပမာ တခု ပြောပြပါမယ်။ ကောင်လေးတယောက်က ကောင်မလေးတယောက်ကို စာရေးပြီး ဒီလိုပြောလိုက်တယ်။
ဗမာလိုရေး ပြောရရင်...“ နင့်ကို ငါ ချစ်တယ် ။ ဒါပေမဲ့ နင်က ငါ့ ကို မုန်း တယ်။”
အင်္ဂလိပ် လို ပြော ရင် ..“I love you but you hate me” ပေါ့ ။
တရုပ်လို ဆိုရင်တော့ “我 爱 你 但 你 恨 我”ပေါ့ ။ ဒါက ဘယ်ဘက်ကနေ စဖတ်တဲ့ ပုံစံ ကို ပြောတာ။ ..
ဒါပေမဲ့ ညာဘက်ကနေ စဖတ်လိုက်တဲ့ အခါကျ တော့ “ 我 恨 你 但 你 爱 我 ”ဖြစ်သွားရော ( ငါနင့်ကို မုန်းတယ် ဒါပေမဲ့ နင် က ငါ့ကို ချစ်တယ် ( I hate you but you love me )လို့ ဖြစ်မနေပေဘူးလား နော်။ ဒီလိုသာ သွားပြောမိလို့ ကတော့ ဟို မိန်းကလေး က ထပြီး ပါးမချလိုက်ရင် ကံကောင်း ပဲ။း))
စာအုပ်၊ သတင်းစာ ။ လှန်ပုံ လှန်နည်းကလည်း သူများနဲ့မတူ။ ဘာသာ လူမျိုး ပေါင်းစုံတို့ဟာ များသောအားဖြင့် စာအုပ်တအုပ် သတင်းစာတစောင် ကို ဖတ်မယ် စာရွက်တွေ လှန်မယ်ဆိုရင်လည်း ရှေ့ ဆုံးစာမျက်နှာကို ဘယ်ဘက်သို့ ဆွဲလှန်ပြီး နောက်တမျက်နှာဆက်ဖတ်ပေါ့နော် ။ ဂွတီးဂွကျ တရုပ်စာအုပ်တွေမှာ တော့ နောက်ဆုံး စာမျက်နှာ ကို ညာဘက်သို့ ဆွဲလှန်ပြီးတော့မှ နောက်တမျက်နှာ ဆက်ဖတ်ကြရတယ်လေ ။ ဒါကိုမသိတော့ အလှန်မတတ်တာကြောင့် လူရှေ့ သူရှေ့အရှက်ကွဲခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်လေးကို ပြန်တွေးမိလို့ ပြောပြအုံးမယ် ။
ဒီလူ့ ပြည်ဝပြည်ကြီး ကို မျက်စိသူငယ်နဲ့ ရောက်လာအပြီး များမကြာမှီ တနေ့ မှာ ပေါ့ ။ စာမတတ် အကန်းနဲ့တူ ဆိုသလို ဖြစ်နေမစိုးလို့ ဘူးသီးငပေါင်းကြော် ပဲပင်ပေါက် အညောက်ထွက် သလို ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ တရုပ်စာကို နဲနဲပါးပါးတော့ သင်အုံးမှပဲလို့ အတွေးဝင်လာတယ်။ ဒါနဲ့ တရုပ်စာသင်ဖို့ သင်တန်းတခု သွားတက်တယ် ။ ပထမ တရက်မှာ တရုပ်ဆရာမက အသံထွက် ပေါ ဖေါ မော ဖှော မှ စပြီး သံပြိုင်လိုက်ဆို ရတာပေါ့ ။နောက်တော့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့စာမျက်နှာ ၁ ကို ဖွင့်ခိုင်းတယ်။ ၁ ကနေစပြီး ရွတ်ကြ ရေးကြ ပေါ့လေ။ သူများတတွေ လိုက်ဆို လို့ခရီး အတော်ရောက်တဲ့ ထိ ကိုယ့်မှာ စာမျက်နှာ ၁ ရှာ မတွေ့ သေးဘူး ။ ဘေးကလူကို ကြည့်လိုက် ရှေ့ ကလူကို ခေါင်းစောင်းမျှော်လိုက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတာကို ဆရာမ က မြင်သွားပါတယ် ။ ကိုယ့်နာမယ် ခေါ်ပြီး စာမျက်နှာ ၁ ဖွင့်လေ.. တဲ့ ( တကယ်ဆို အဲဒီ အချိန်က သူ့ အမူအရာကြည့်ပြီး နားလည်လိုက်တာပါ ။ ဘာတွေ ပြော နေလဲဆိုတာတော့ အတိအကျ မသိဘူးပေါ့)။ ဒါနဲ့ ခေါင်းခါ ပြလိုက်တယ် ။ ဘယ်လို ပြန်မေးရ မယ်မှန်းမှ မသိတာ ကိုး ။ ဆရာမ က သူပြောတာ မလုပ်ဖူးလို့ များ သဘောပေါက်သွားသလား မသိ ။သူ့စာအုပ် ထောင်ပြပြီး လှန်ခိုင်းတော့တာပဲ ။ ဟယ် ခက်ပြီ ။စာအုပ်ကို ခါတိုင်းလှန်သလို ရှေ့ ဆုံးက လှန်တာပဲ ။ စာမျက်နှာ ၁ ကို မတွေ့ ပါဘူး ။ အဲဒီတော့ မှ ဘေးမှာထိုင်တဲ့ သူ တယောက်က ကိုယ့်စာအုပ်တအုပ်လုံးကို ဇတ်ကနဲ ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး ဖွင့်ပေးတော့ မှ တွေ့ ပါပြီ ။ ဟိုးနောက်ဆုံးတရွက်က စာမျက်နှာ ၁ တဲ့လေ ။ အဲ့လို ဂွကျ တာ ပါ ။
ခုဆိုရင် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတိုင်းလိုလို စီးပွားရေး ခြွတ်ခြုံကျ နေကြတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရေးဆိုပြီး စာတမ်းဖတ်တာမျိုး လုပ်တယ်လို့ တော့ မကြားမိပါဘူး ။ စီးပွားရေး ဦးမော့အောင်လုပ်ကြတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ကိုယ်တိုင်လည်း နားမလည် ။ ကမ္ဘာ့ ငွေကြေး စတော့ ရှယ်ယာ ကစားခြင်း ကိုလည်း နားမလည် ။ မစွန့်စားရဲ ။ ဘဏ်ထဲ ရှိတဲ့ ကိုယ့် လခလေး လိပ်နှုန်းနဲ့ တဖြေးဖြေး တက်လာလိုက် ၊ သုံးတာများတဲ့အချိန်ဆို ကွန်နက်ရှင် ကျသလို ဝုန်းကနဲ့ လျော့ကျသွားလိုက် နဲ့ ပဲ လခ ထုတ်ရက် မျှော်နေမိရတဲ့ အချိန်ကာလတွေ နှစ်လ တာရှည် ကြာခဲ့လေပြီပေါ့ ။
လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေထဲမှာလည်း စတော့ရှယ်ယာ ကစားကြသူတွေ အများကြီးပါပဲ ။ တနေ့တနေ့သူတို့ကြည့်နေလိုက်ကြတဲ့ ဈေးကွက် အတက်အကျ တီဗွီ အင်တာနက် လိုင်းတွေ မှာ ဂရပ်မျဉ်း အတက် အကျ တွေ ၊ အနီရောင် အစိမ်းရောင် မျဉ်း ဖြောင့် မျဉ်း ကောက်တွေ ကြည့်ရင်း ဘုမသိ ဘမသိ ကိုယ် လည်း ရောယောင် ပျော်တတ်လာတယ် ။ ဘယ်ဈေး ဘယ်လောက်တက်မှန်းမသိပေမဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေ သီချင်းတအေးအေး မြူးကြွနေတဲ့ သွက်လက်နေတဲ့ အချိန်ဆို ခန့်မှန်းတတ်လာတယ်။ ဒီနေ့အခြေ အနေကောင်းတယ်ပေါ့လေ။ အဲ့ဒီနေ့တွေ နေ့ လည် နေ့ ခင်း ဆို အနည်းဆုံး အအေးလေး တခွက် တော့ တကာခံသူ ရှိတယ်ပေါ့လေ။ တခါတလေ ကံကောင်းတဲ့ ရက်ဆို ပီဇာလေး၊ ကြက်ကြော်လေး ကြိတ်ရသေးပေသကိုး ။အလကားရတာများ စားရတာ သိပ်အရသာရှိတာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ဝယ်ထားတဲ့ စတော့ရှယ်ယာ ဈေးကျတဲ့ရက်ဆို ရင် တော့ ၊ ကိုယ့် ဟာကိုယ် အမှား မလုပ်မိအောင် သတိထား၊ ကြည့်ရှောင် ပေရော့ ပဲ ။ အဲလိုတက်ဈေးကျဈေးတွေကို နားလည်ဖို့ ရာကလည်း အတော်ကြီး ကြိုးစားပမ်းစား မှတ်မိအောင် လုပ်လိုက်ရသေးတယ်။ အကြောင်းကတော့ တက်ဈေး ကျဈေး ပြတဲ့ အနီမျဉ်းရယ် အစိမ်းမျဉ်းရယ် ကို ဂွတီးဂွကျ တရုပ်တွေက ကပြောင်းကပြန် သတ်မှတ်ထားကြလို့ပါပဲ ။ နိူင်ငံ အသီးသီးမှာ ကစားကြတဲ့ စတော့ရှယ်ယာ ဂရပ်မျဉ်းကြောင်းတွေ မှာ အတက် ဆိုရင် အစိမ်း ရောင်၊ အကျ ဆိုရင် အနီရောင် ပေါ့လေ ၊ တသမတ်ထဲ ဖေါ်ပြကြတယ် ။ သို့ ပေသော်လည်း ကိုရွှေတရုပ်တို့ က အတက်ကို အနီရောင် ၊ အကျ ကို အစိမ်းရောင်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်တဲ့လေ ။ပြောကို မပြောချင်တော့ဘူး။
ဒီအကြောင်း သေချာ မသိသေးခင် တနေ့မှာ တီဗွီမှန်သား တပြင်လုံးနီးပါး စိမ်းနေတာ တွေ့ တော့ ကိုယ်လည်း ကစားတာ မဟုတ်ပဲ အားရဝမ်းသာ နဲ့ အော်ပြော မိတယ် ။“ ဟေး... ဒီနေ့ တော့ ငါ ကံကောင်းတယ် စားဖို့အသင့်ပြင်ထားတယ်” ဆိုတော့ သူတို့ လည်း တဟေးဟေး နဲ့ တီဗွီရှေ့ ကို ပြေးလာပြီး အကြည့် ၊ လက်မြန်တဲ့ တယောက်က ကိုယ့် ကျောကို ဗြန်းကနဲ မြည်အောင် ဗျောတီး ပါတော့တယ် ။“ ဟင် ။ နင်က ငါတို့ ရှုံးတာကို ဒီလောက် ပျော်နေရသလား ”တဲ့ ။ “ဟာ ဒုက္ခပါပဲ ။ ဒီတခါလည်း မှား ပြန် ပြီ ” လို့ရယ်ကျဲကျဲ လုပ်နေတဲ့ ကိုယ့်ကို တွေ့ တော့ မှ သူတို့ လည်း ရယ်နိုင်ပါတော့တယ်။ တရုပ်မတယောက်က ပြောလိုက်သေးတယ်။ “မသေမချင်း မှတ်ထား ။ နီတာက ကောင်းတယ် ၊ စိမ်းတာက မကောင်းဘူး ”တဲ့ လေ..။ ဪ။ တရုပ်တွေများ အနီကို ဒီလောက်တောင်ကြိုက်တာ ပါလား ။ ဒါကြောင့် သူတို့ နတ်တွေမှာလည်း မျက်နှာနီနီ နတ်တွေ ၊ မည်းမည်းနတ်တွေ ၊ စိမ်းစိမ်း နတ်တွေအစုံ ရှိကြတာပဲ ထင်ပါရဲ့ ။ ဒီတော့ နတ်စိမ်းမျက်နှာကြီး ဖြတ်ကနဲ မြင်ယောင်မိလို့မေးကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ ။ ဟင်..ဒါဆို ဟို မြောက် (寺廟=တရုပ်ဘုရားကျောင်း )ထဲက မျက်နှာစိမ်း နတ်ကြီးက မကောင်းဘူး ပေါ့ နော် . ဆိုတော့ တရုပ်မက “ဟယ်.. နင်တော့ ဒုက္ခရောက်တော့မယ် ။ နတ်ဆိုတာ တော့ အနီရော အစိမ်းရော အကုန်ကောင်းကြတာချည်းပဲ ”တဲ့။ သူတို့တွေ အများအားဖြင့်က နတ်ကိုးကွယ်ကြသူတွေ များတာကိုး..နတ်တွေ ပူဇော်ပသ ပွဲတွေ လည်း နှစ်စဉ် အကြီးအကျယ်လုပ်လေ့ရှိကြတယ် ။ ဝက်ကြီးတွေ ကြက်တွေ ဘဲတွေ အကောင်လိုက် ချက်ပြုတ်ပြီး နတ်ပူဇော်လေ့ရှိကြတယ်။ အိုး.. သူတို့ ဖာသာ ဘာနတ်ပဲ ပူဇော် ပူဇော် ကိုယ့်အတွက် အရေးမကြီးပါဘူး။ ပွဲတွေ ရှိတော့ စားရဝါးရတာ အမြတ်ပဲ မဟုတ်လား ။ ဒါက အနီ နဲ့ အစိမ်း သတ်မှတ်ပုံတွေ ကပြောင်းကပြန် ဖြစ်တာလေးတခု ပေါ့ ။
မီးပွိုင့် မှာ မီးနီ မီးစိမ်း မီးဝါ ဆိုတာ တကမ္ဘာ လုံး တူတူ ပဲ သတ်မှတ်ထားကြတာပါ ။မီးနီရင် ရပ် ၊ မီးဝါရင် သတိ ၊ အရှိန်လျှော့ ။ မီးစိမ်းရင် သွား ... ဒီ signal တွေက သိပြီးသားတွေ ပဲမဟုတ်ပါလား။ မီးဝါလို့ပွိုင့်မှာရှိတဲ့ လူကူး မျဉ်းကျား မရောက်ခင် မျဉ်းဖြူကို ကျော်သွားမိရင်တောင် နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့မနည်းလေ့ကျင့်ထားကြရတဲ့ ကိုယ်တို့ရွှေပြည်သားတွေ ကို ဒီနေရာမှာ အတော်ချီးကျုးဖို့ကောင်းပါတယ် ။ ဘာလို့ လည်းဆိုတာ သိကြမှာပါ ။ မီးပွိုင့်မှာ ချောင်းနေ ။ အဲလေ.. စောင့်နေကြတဲ့ ဆရာသမား ပရုပ်လုံးနဲ့ ဘဲဥ များ က ဒါမျိုးများဆို မျက်စိလျှင်မှလျှင် ။ ဝီစီသံ တရွှီးရွှီး နဲ့ အလုပ်တာဝန်ကို ကျေပြွန်ကြတော့တာပဲမို့ဆင်ဖြူတော် လေးတွေ နေရင်း ထိုင်ရင်း မထွက် သွားရလေအောင် ယာဉ်စည်းကမ်းကို တကယ့်ကို တိတိကျကျ လိုက်နာလေ့ ရှိကြတယ်။ ( ဟဲဟဲ၊ ဘဲဥ တွေ မရှိတဲ့ အချိန်ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့လေ၊ ခုတော့ ရွှေဘဲဥတွေလည်း ခေတ်နဲ့ တပြေးညီ ခေတ်မှီ တိုးတက် လာကြပြီ ကြားတယ်။ အိုဗာစပိဒ် တို့ ၊ မီးနီဖြတ်တာတို့ ။ မရပ်ရတဲ့ နေရာ မှာ ရပ်ထားတာ တို့ ဆိုရင် ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ပြီး ဒါဏ်တပ်နေကြပြီ ကြားပါတယ်။ နေပူထဲ ထွက်ပြီး ကားတားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ ။ များများ မဆောင်ချင်သူတွေ လည်း ၅၁ လမ်းရုံး မော်တော်ယာဉ် ထိန်း ရဲ ကွန်ပြူတာခန်းကို သွားပြီး အလျှော့ အတင်းလုပ်လို့ ရပါသေးတယ်။ ဒါလိုမှ မဟုတ် ရင် လိုင်စင်ဝင်တဲ့ အခါ ကျတော့ အချိန်ကုန် ငွေကုန် လူပမ်း ဟိုဘက် ဒီဘက် ပြေးပေရော့ပဲ။ ဤကား... ..လမ်းကြုံတုံးဖေါက်သည်ချ သော ကိုယ်တွေ့၊ ကိုယ်တွေ့ .. )။
ဒီတိုင်းပြည် ဒီတရုပ်တွေ ကျတော့ မီးပွိုင့် signal အယူအဆက တမျိုး ။
တနေ့ မှာ သူငယ်ချင်း တရုပ်မ တယောက် မောင်းတဲ့ ကားကို ဘေးကထိုင်စီးပြီး စကားတပြောပြော လာလိုက်ကြတာ.. မီးပွိုင့် တခု အရောက်၊ မီးစိမ်း ကနေ မီးဝါ ရုတ်တရက် ပြောင်းသွားတယ် ။ တကယ်ဆိုရင် မိနစ် အချိန်ပြတဲ့ countdown timer တွေ ရှိနေတာ ကို သတိမထား မိလို့ ပါ ။ အဲဒီအချိန်မှာ မီးဝါကို ရုတ်တရက်တွေ့ လိုက်ရတဲ့ တရုပ်မက ဘာလုပ်တယ် ထင်သလည်း ။ လီဗာကို အသကုန် နင်းတော့တာပါပဲ ။ အမလေး ဘုရား ဘုရား မော်တော်ပီကယ် တော့ မရှိ ။ ဒါပေမဲ့ ပွိုင့်တိုင်းလိုလိုမှာ စီစီတီဗီ ကင်မရာတွေ တပ်ထားတာ ။ ဒုက္ခပါပဲ ဒါဏ်ငွေ ရိုက်ခံ ထိတော့ မယ် လို့စိုးရိမ် မိတဲ့ အပြင် ၊ ဘယ်ကားနဲ့များ ဝင်ကြုံး မလည်း တွေးမိလို့မျက်စိမှိတ်ပြီး အော် လိုက် မိတယ်။ အဲဒီတော့ ကားမောင်းနေတဲ့ တရုပ်မက “နင်ဘာဖြစ်တာလည်း ။ မီးဝါပြနေတာက မြန်မြန်မောင်းလို့ပြောတာ လေ”.. တဲ့ ။ ဪ .. သူတို့အယူအဆ နဲ့ သူတို့ကျတော့ လည်း ဟန်ကိုကျလို့ ။ မရှောင်ရင်လွတ်တယ် ဆိုသလို အဲ့လို မြန်မြန် မောင်းလိုက်တော့လည်း မီးနီမမိ လွတ်သွားတာ တကယ်ပါပဲ ။ ( ကံကြီးပေလို့ယာဉ်တိုက်မှုမဖြစ်ပဲ လွတ်သွားတာ မို့နောင် မှာ အဲဒီ ဂွတီးဂွကျ တရုပ်မ မောင်းတဲ့ကားဆို ဘယ်တော့ မှ လိုက်မစီး ဖြစ်တော့ပါ ဘူး ။ အသက်ကို ဥာဏ်စောင့်တယ် မဟုတ်ပါလား)..
အရောင် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်တခု ဂွတီးဂွကျ ဖြစ်ရတာ ရှိသေးတယ် ။ အနီကြိုက်တဲ့ တရုပ်တွေရဲ့မင်္ဂလာ အခမ်းအနားတွေမှာ ရဲရဲတောက်အောင်နီကြပြန်ပေတယ် ။ မင်္ဂလာ လက်ဖွဲ့ပေးတဲ့ စာအိတ်ဆို လည်း အနီမှ ။ ဒါကို နားမလည်တဲ့ အကျွန်ုပ်ခမျာ ၊တနေ့မှာ မင်္ဂလာဆောင်သွားရောက်ဖို့ အကြောင်းရယ်က ဖန်လာပြန်တယ်။ မလွှဲသာ မရှောင်သာ မသွားလို့ လည်း မကောင်းတာမို့လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်အောင် လက်ဖွဲ့ ငွေပဲ ထဲ့မယ်ပေါ့ ။ဒီလိုနဲ့ ရွှေပြည်ကြီးက ထုံးစံအတိုင်း စာအိတ်ဖြူလှလှလေး ထဲ လက်ဖွဲ့ ငွေကိုထဲ့ပြီးသွားမိပါလေရော ။တော်သေးတယ် ၊ မင်္ဂလာ အခမ်းအနား မရောက်ခင်မှာပဲ သူငယ်ချင်းတရုပ်မက နင် လက်ဖွဲ့ငွေ ဘယ်လောက်ထဲ့သလည်း စပ်စုမိပေလို့ ပဲ။ နို့ မို့ ဆို လူကြားထဲ မျက်နှာပျက်ရပေအုံးမယ်။ ဪ။ ဒီပြည်ကြီးမှာ ဒီလူမျိုးတွေက စာအိတ်ဖြူဆိုတာ အသုဘအကူငွေကို ထဲ့ကြတာ တဲ့လေ ။ အဲ့ဒီနောက်မှာ တော့ စာအိတ်နီ 紅包 , နဲ့ စာအိတ်ဖြူ 白包 တို့အားခွဲခြား အသုံးချပုံတွေ ကို အရိုးစွဲ တဲ့ထိ မှတ်လို့ သာ ထားလိုက်ရပေတော့သဗျိုး ။
ဂွတီးဂွကျ နိုင်လှတဲ့ တရုပ် လူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံ တွေးခေါ်ပုံများ နောင် အလျဉ်းသင့်တာရှိရင် ဆက်ပြီး ဖေါက်သည်ချပါအုံးမယ် ။ခုလောလောဆယ်မှာတော့ တံငါနားနီး တံငါ ဆိုသလို ကိုယ်တိုင်လည်း ဂွကျ သူများ နဲ့နီးတော့ ဂွကျကျဖြစ်နေပြီလား လို့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်နေမိပါတယ်။
မိတ်ဆွေ အပေါင်းတို့ မှာ ရော၊ ဂွတီးဂွကျ အတွေးတွေ အမြင်တွေ အပြုအမူတွေများ ရှိနေပြီလား....
အားလုံး ချမ်းမြေ့ရွှင်လန်းကြပါစေ ။
:kiki : at 8/11/2011 08:00:00 PM
ဒီနေ့ တီဗီနဲ့ သတင်းစာ မှာ တွေ့ လိုက်ရတဲ့ သတင်း ။ သတင်းလို့ ဆိုတော့ လုပ်ကြံ ရေးထားတာလည်း မဟုတ်တန်ရာ ။ မီဒီယာတွေ ဖွတယ် လို့လည်း ယူဆလို့ မရ ၊ သူတို့ ကိုကြည့်ပြီး ရင်မောမိသလို ၊ ဘယ်အချိန်ခါမှာ ကြေကွဲဘွယ်ရာ နောက်ဆက်တွဲ သတင်းများ ကြားရပါလိမ့်မလည်း လို့ လည်း စိုးရိမ်စိတ် ဝင်လာမိတယ်။
အသိဥာဏ်ပညာ ရှိမှု မရှိမှု နဲ့ သက်ဆိုင်သလား ၊ သူများပြောစကား လွယ်လွယ် ယုံတတ်သူများ လို့ ယူ ဆလို့ ရမလား၊ တကယ့်ကို ရောဂါ ကြီးမားပြီး လူ့ လောကကြီးထဲ မနေချင်လောက်အောင်ကို စိတ်ညစ်နေကြသူတွေလား ။ သိပ္ပံပညာ တွေ အံ့မခန်းထွန်းကားနေပြီဖြစ်တဲ့ ယနေ့ခေတ်ကြီး ထဲမှာ ၊ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲ အယူလွဲနေကြသူတွေ ပဲလား ၊ တခုခုတော့ မှားနေကြပြီ လို့ယူဆလို့ရတဲ့ အကြောင်းအရာ နဲ့ ဆက်စပ်လို့ ရတဲ့ အဖြစ် တခု၊ သတင်းတခု ဖတ်လိုက်ရ မြင်လိုက်ရ လို့စိတ်ထဲမှာ အံ့သြခြင်းကြီးစွာ ဖြစ်သွားမိတယ်။ အကြောင်းစုံလင် သိချင်ရင် ဖြင့်တော့ ရှေ့ဆက် ကလစ်ပြီး ကြည့်ကြပါကုန်...
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ သတင်းတခုပါ။
အတိုချုပ်ပြောရရင် တော့ အဆိုပါနိုင်ငံမှ လူတချို့ ဟာ မီးရထားသံလမ်းတွေပေါ်မှာ ပုံ ပြ ပါအတိုင်း ကန့်လန့်ဖြတ် လှဲလျှောင်း ပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်ကုထုံး လို့ခေါ်တဲ့ ကုသနည်း တမျိုး ကို ပြုလုပ်နေကြ ပါတယ်။ဒီပုံကတော့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ Rawa Buaya,မြို့ အနီးရှိ ရထားသံလမ်းပေါ်မှာ လှဲလျှောင်းနေကြသူများပါ။
ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်ကျော်လောက်မှာ တရုပ်လူမျိုး လူတယောက် လေသင်တုန်းဖြတ် ရောဂါ ဖြစ်နေပြီး ကုသလို့မပျောက်ပဲစိတ် အညစ်ကြီး ညစ်နေရာက သူ့ ကိုယ်သူ အဆုံးစီရင် ဖို့စိတ်ကူး ဝင်လာပါတယ်တဲ့ ၊ ဒါကြောင့် ရထားသံလမ်းပေါ် မှာ လှဲပြီး ရထားကြိတ်ခံ ဖို့စောင့်နေရာမှာ ရထားမကြိတ်မိပဲ ၊ သူ့ ရောဂါပျောက်သွားတယ် ဆိုတဲ့ ကောလဟာလ သတင်းတခု ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို နဲ့ တဆင့်စကား တဆင့်ပွားရင်း ရောဂါပျောက်ချင်သူတွေ ရထားသံလမ်းပေါ် လာပြီး လှဲလျှောင်းကုသမှု ခံယူလာကြ တယ်။ တနေ့တနေ့ဒါဇင်များစွာ သောသူတွေ ၊ ဆေးကုသဖို့စရိတ် မတတ်နိူင်သူတွေ ၊ ရောဂါပျောက်ချင်ဇောနဲ့ အန္တရာယ်လက်တကမ်းမှာ အသက်ကို လောင်းကြေးထပ် ပြီး ရောဂါကုသနေကြပါတယ်။
သူတို့ လှဲနေကြတဲ့ မီးရထား သံလမ်း နောက်တခုမှာ ရထားကြီးက အရှိန်နဲ့ ဖြတ်သွားတာကို မကြောက်မရွံ့ ပဲ လှဲလျှောင်းနေကြခြင်းဖြင့် ရထားသံလမ်းပေါ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း electromagnetic fields (EMFs) က၊ သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ အိပ်မပျော်တဲ့ ရောဂါ အစရှိတာတွေကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ် လို့အယူလွဲစွာ ထင်မြင်နေကြပါတယ် ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက ဒီအခြေအမြစ်မရှိတဲ့ ကုသနည်း ဟာ ရောဂါ ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ် လို့ စမ်းသပ်တွေ့ ရှိမှု မရှိကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါ နဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို ပိုပြီး ဆိုးဝါးစေနိုင်တယ် လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။
Electrical fields may actually worsen diabetes
While there is no consensus in the medical community, there are indications that exposure to electromagnetic fields (EMFs) may actually promote diabetes and related illnesses. The Dirty Electricity Blog notes thatapatient’s hypoglycemic awareness (feeling that blood sugar is dropping) is dulled by the presence of intense EMFs/dirty electricity.
ဒါပေမဲ့လည်း ဆီးချိုရောဂါ ခံစားနေရတာ ၁၃နှစ် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ အသက် ၅၀ အရွယ် အမျိုးသမီး Sri Mulyati ဆိုသူဟာလည်း ဒီလျှပ်စစ်သံလိုက် စီးကြောင်းတွေကြောင့် ဒီ ၆ လ အတွင်း သူရောဂါ သက်သာလာတယ်လို့ယုံကြည်နေပါသေးတယ်။
ဒီ ဗီဒီယိုအပိုင်းလေးကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူတို့အစိုးရကိုယ်တိုင်က ဒီလို ရထားလမ်းပေါ် နေသူတွေကို ထောင်ဒါဏ် ၃ လ ( သို့ မဟုတ်) အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၈၀၀ နဲ့ တူညီတဲ့ ဒါဏ်ငွေ ချမှတ်မယ် လို့ အမိန့်ထုတ် တားဆီး ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ခုချိန်ထိတော့ ဘယ်တဦးတယောက်ကိုမျှ ထောင်ဒါဏ် ငွေဒါဏ် ချမှတ်ခဲ့ခြင်း မရှိသေးသလို ၊ ခုလို ပဲ ဆက်လက် လှဲလျှောင်းကုသခံနေကြသူများ ရှိနေဆဲပါပဲ။ ရောဂါပျောက်လိုသူတချို့ ကလည်း မပျောက်မချင်း ဆက်လက်လာနေဦးမယ် လို့ပြောကြားပါတယ် ။ ရောဂါမပျောက်ပဲ အသက်ပျောက်ရမဲ့ အဖြစ်ကို ကြိုတင် မတွေးကြတာ သူတို့ စဉ်းစားဥာဏ် နည်းပါး နေကြလို့လား ၊ အယူလွဲနေကြဆဲလား တော့ မပြောတတ်ပါ ။
အမိမြန်မာပြည်ကြီးမှာလည်း အလားတူ အယုံမှားနေကြသူများ ၊ ရောဂါပျောက်နိုးနဲ့ ကင်ဆာ အကြိတ် အဖုကို မိုးကြိုးသွားဖြင့် ထိပွတ်ကုသသူများ၊ မကောင်းဆိုးဝါးကပ် ၊သူတပါး ပြုစားခံရတယ် ဆိုပြီး ဆေးကြိမ်လုံးဖြင့်ရိုက်နှက်ကုသသူများ၊ ဗေဒင် ယတြာ ဆေး အင်း မန်း တွေ သုံးပြီး အနာတခြား ဆေးတခြား ကြောင့် မလိုအပ်ပဲ အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသူများ ရှိနေပါတယ် ။ ကျန်းမာရေးအသိ ပညာပေးမှု ချို့တဲ့မှုများကြောင့် ၊ ကျန်းမာရေးအသိ နည်းပါးမှု များကြောင့် ၊ ဆေးကုသ စရိတ် ငွေကြေးချို့တဲ့မှုကြောင့် ဆေးရုံ ပြချင်သော်လည်း မပြနိုင် မကုနိုင် ဖြစ်ရပြီး ဗိန်းန္ဓောဆရာ လက်ချက်နဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးရသူများလည်း ရှိနေကြပါတယ် ။ဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကို ပပျောက်အောင် လုပ်သင့်ပါတယ်။
ဒီသတင်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးတွေးမိတာ တခုရှိပါသေးတယ်။ အရှေ့အနောက် တောင်နဲ့ မြောက် တလံတလျား ရှိနေတဲ့ အမိမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ အဓိက လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဖြစ် အသုံး ပြုနေရတဲ့ ရထား သံလမ်း တွေပေါ်မှာလည်း နွားကျောင်းသား ကျွဲကျောင်းသား နဲ့ လူ တချို့ ရထားသံလမ်းပေါ်မှာ ( ကတ္တရာ ကားလမ်းမပေါ်မှာရော) အနားယူရင်း အိပ်ပျော်သွားလို့ရထားကြိတ်၊ကားကြိတ် မိပြီး အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ သတင်းတွေ မကြာခဏ ကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခုလိုများ ရောဂါပျောက်တယ် ၊ ဘာညာ ဆိုတဲ့ ကောလဟာလ သတင်းတွေသာ ပြန့် နှံ့ သွားခဲ့ရင်တော့ ရောဂါကြီးမား ပြီး ၊ ငွေကြေးချို့ တဲ့၊ အတွေးအခေါ်ချို့ တဲ့ ၊ အယုံလွယ်သူများ ဟာလည်း ခုလိုပဲ ရထားသံလမ်းပေါ်မှ လျှပ်စစ်ဓါတ်ဖြင့် ရောဂါကုသထုံးကို လိုက်ပြီးလုပ်နေကြမလား ...။ ဒါမှ မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ခြင်းခံရတော့မယ် လို့ သတင်းထွက်နေတဲ့ မီးရထား ဆက်သွယ်ရေး ပိုင်ရှင်ကြီး မှ သံလမ်းလျှပ်စစ် ကုထုံးသစ်ဖြင့်၊ အခကြေးငွေယူကာ၊ ရောဂါကု ဖို့ များ စီမံလာလေ မလား.... ။ မြစ်ကြီး ဧရာဝတီ အတွက် စိုးရိမ် မျက်ရည်ကျ နေကြရတဲ့ ပြည်သူ များ အပြင် ၊ ရထားသံလမ်း ကြောင့် မျက်ရည်ကျရသူများ ပါဝင်လာလေမလား ...။
လွတ်လပ်တယ် ဆိုပြီး ကားလမ်းမပေါ် ဆေးရိုးတက်လှန်းနေကြတာ ၊ကားကြိတ်ခံရလို့ ဆေးရိုးက ဘာမှ မဖြစ်နိူင်ပေမဲ့၊ ခုလို ရထားလမ်းပေါ် မိမိကိုယ်ကို တက်လှန်း နေကြရင်ဖြင့် ကံမကောင်းတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါ ရောဂါ မပျောက် ပဲ အသက်ပျောက်ရမှာ သေချာပါတယ်။
မိမိအသက်ကို လောင်းကြေးထပ်ပြီး အန္တရာယ် လက်တကမ်းမှာ သေမင်းနဲ့ ကစားနေကြသူ ဒီလူများကိုကြည့်ပြီး အတုမယူကြစေလိုပါ ။ အရာရာကို ကိုယ်ပိုင် အသိဥာဏ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး အကောင်း အဆိုး၊အကြောင်းအကျိုး ၊ အမှားအမှန်ကို ခွဲခြား သိမြင် နိုင်ကြပါစေ ။
ရည်ညွှန်းချက် ။ ။
:kiki : at 8/04/2011 06:35:00 PM
မှားချက်ရယ် တစ်ချက်ကြောင့်၊ စေတနာတခုမှ ဝေဒနာများစ...